Waa maxay sababta ay jamaahiirta Liverpool ugu farxi karaan iney kulanka furitaanka Premier League la ciyaari doonaan Norwich? Sabab farxad leh ayaan jirta. – Gool FM
Waa maxay sababta ay jamaahiirta Liverpool ugu farxi karaan iney kulanka furitaanka Premier League la ciyaari doonaan Norwich? Sabab farxad leh ayaan jirta.
Abdirashid Mohamud June 13, 2019
(Liverpool) 13 June 2019. Kadib markii lasoo saaray isku aadka horyaalka Premier League fasal ciyaareedka soo aadan isla markaana la ogaaday in Liverpool ay kulanka ugu horreeya la ciyaari doonto Norwich City, waxaa durba jamaahiirta kooxdaan taariikhiga ah la xasuusiyay sheeko qurux badan.
Liverpool waa kooxda labaad ee ugu guulaha badan tartamada gudaha Ingiriiska, waxeyna ka mid tahay kooxaha ay ku faanaan dadka Ingiriiska marka laga hadlo taariikhda fog iyo wax walba oo awood iyo maqaam kubadda cagta ah, balse kooxdaan waxey muddo badan ku dhiban tahay hanashada horyaalka.
Reds iyadoo gaartay maqaam dhibco aysan wali gaarin kooxo waaweyn oo dhawr jeer hantay horyaalka sanadahii ugu dambeeyay ayey hadana ku guuldareysatay fasalkii lasoo dhaafay, 97-dhibcood ayey keensatay balse 1-dhibic ayey ku lumiyeen horyaalka maadaama Manchester City ay la timid 98 dhibcood.
Shabakadda Mirror ayaa soo qortay sheeko xiiso leh oo ku saabsan kulanka furitaanka horyaalka Premier League ee dhexmari doona Liverpool & Norwich City.
“Markii ugu dambeysay oo ay Liverpool kulanka furitaanka horyaalka la ciyaarto kooxda Norwich City, waxey aheyd 1977, waxeyna ku guuleystay horyaalka, waxaana kaalinta 2-aad galay Manchester City”
Miyaa la go’aamiyay tartanka horyaalka Premier League?
Dabcan waxaa jira calaamado la daliishado oo kubadda cagta ah, balse dagaal dheer iyo 38-kulan kadib waxaa la ogaan doonaa sida ay wax noqdaan.
London Derby & Manchester Derby - Taariikhdee ayey dhacayaan kulamada darbiga ah ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedka soo aadan?
Mid ka mid ah saaxiibada qaaska ah ee Maurizio Sarri oo sheegay xiliga ay Juventus dhameyn doonto heshiiskiisa